01 မတ်လ 2022
မည်သည့်စက်၏ဝယ်ယူမှုစျေးနှုန်းသည် အမှန်ပင်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်၊ သို့သော် ဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်အပေါ်သာ အာရုံစိုက်လေ့ရှိပြီး စက်တစ်လုံး၏စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်အပေါ် ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေသည့် အခြားကန့်သတ်ဘောင်များမှ အာရုံပြောင်းသွားလေ့ရှိသည်။ SANOVOဖောက်သည်များသည် လက်တွေ့ဘဝထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့် ထိရောက်မှုဒေတာကို ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ရန် ကူညီပေးခဲ့သည်။
ကြက်ဥထုပ်ပိုးမှု တိုးတက်မှုနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းစနစ်အပေါ် သက်ရောက်မှု
03 ဇန်နဝါရီလ 2022
ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းအတွင်း တိုးတက်မှုများသည် ပိုမိုဆန်းသစ်လာကာ အထူးသဖြင့် ကြက်ဥအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းတွင် တန်ဖိုးကွင်းဆက်တစ်လျှောက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးလျက်ရှိသည်။ ဤတိုးတက်မှုများအကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့သည် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများအပေါ် မည်ကဲ့သို့အကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိရန် နောက်ထပ်ဖတ်ပါ။
ဆန်းသစ်သောစက်ပစ္စည်းများဖြင့် အလုပ်သမားစိန်ခေါ်မှုများကို တိုက်ဖျက်ခြင်း။
ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ၊ အပြည့်အ၀ အလိုအလျောက် အဆင့်သတ်မှတ်သည့်လိုင်းသည် မည်သို့ရှိသနည်း။ ငါတို့ စကားကို မယူနဲ့။ Morry Wroby နားထောင်ပါ၊ နာသန်ချန်ဒရန်နှင့် Luke Colla ကြီးစွာသောအဆင့်သတ်မှတ်စက်ရုံစီမံကိန်းအကြောင်း Valley Park Farm သြစတြေးလျ၌တည်၏။
15 ဇူလိုင်လ 2021
တောင်အမေရိကသည် ကြက်ဥလုပ်ငန်းတွင် ကြီးမားပြီး လာမည့်စျေးကွက်ဖြစ်သည်။ တိုက်ကြီးအတွင်း တွေ့ရှိရသည့် သဘာဝသယံဇာတ အများအပြားကြောင့် ကြီးထွားမှု အလားအလာ ကြီးမားပြီး ဥထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည်ကို ရရှိနိုင်လုနီးပါးရှိသည့် ကမ္ဘာ့အခြားဒေသများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုထိရောက်မှု အားကောင်းစေမည့် ကြီးထွားမှု အခွင့်အလမ်းများ နည်းပါးသွားစေသည်။
ဗြိတိန်ကြက်ဥလုပ်ငန်းတွင် အထူးကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပံ့ပိုးမှုများကို ပံ့ပိုးပေးသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူပါသည်။
17 ဇွန်လ 2021
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂရိတ်ဗြိတိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ တပ်ဆင်မှုကို အားကောင်းစေပြီး ချဲ့ထွင်နေကြောင်း ကြေညာသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူပါသည်။
2021 Egg Consumer အကြောင်း ကြက်ဥထုတ်လုပ်သူများ သိထားသင့်သည်များ
02 ဇွန်လ 2021
စားသုံးသူအမူအကျင့်သည် ကြက်ဥလုပ်ငန်းအပါအဝင် စက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံးတွင် အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေသော အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ကြက်ဥထုတ်လုပ်သူများအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိမည့် လက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့် ရှုထောင့်များအကြောင်း နားထောင်ရန် နောက်ထပ်ဖတ်ပါ။
အွန်လိုင်းပွဲ - ထိပ်တန်းဥနည်းပညာ- အနာဂတ်ကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
08 ခုနှစ်ဧပြီလ 2021
J29 ရက်နေ့ မှာ ကျွန်တော်တို့ကို ပို့ပေးပါth ဧပြီလအတွက် ထူးခြားသောအွန်လိုင်းဖြစ်ရပ် "ဦးဆောင်-ကြက်ဥနည်းပညာ- အနာဂတ်ကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။". ယခုဝင်မည်!
အမေရိကန်တွင် အဆိုပြုထားသော ခြေရာခံနိုင်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းအသစ်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်း။
15 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2021
ပြီးခဲ့သောလတွင်၊ USA ရှိ FDA သည် နောက်ထပ် ခြေရာခံနိုင်မှု မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ချမှတ်ရန် Food Safety Modernization Act (FSMA) တွင် add-on အဆိုပြုချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပြုထားသော စည်းမျဉ်း၊ 'အချို့သော ထပ်လောင်းခြေရာခံနိုင်မှုမှတ်တမ်းများအတွက် လိုအပ်ချက်များ...
2021 ခုနှစ် နွေဦးတွင် ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်ခြင်း။
22 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2020
နောက်ထပ်ရှိပါသေးတယ်။ ကြက်ဥအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ကြက်ဥပြုပြင်ခြင်းတွင် 2021 တွင် ပိုမိုဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှိပါသည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် စောင့်မျှော်နေပါ။ ...
1 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ 2021 ရက်နေ့အထိ Global AGV နှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း သဘောတူညီချက်
02 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2020
SANOVO နည်းပညာ စက်ရုပ် A/S သည် ကြက်ဥ ပြုပြင်ခြင်း၊ သားပေါက်နှင့် ကြက်မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများသို့ အလိုအလျောက် လမ်းညွှန်ယာဉ် (AGV) ရောင်းချခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းအတွက် Global AGV နှင့် သီးသန့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖြန့်ဖြူးရေး သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည်။
လူတိုင်းသည် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးဥပဒေများကို ညီတူညီမျှ လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။
သင့်လူများကို ကာကွယ်ပြီး လက်မှတ်ရကိရိယာများဖြင့် ပေါက်ကွဲမှုများကို ကာကွယ်ပါ။ နေ့တိုင်း အလုပ်သွားလုပ်ရတာ လုံခြုံတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ရှင်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘေးကင်းမှုကို မစိုးရိမ်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးရန် ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် ကြက်ဥထုတ်လုပ်သူတွေက အဲဒါကို ဘယ်လိုအရေးယူမလဲ။
SANOVO SonoSteam ကိုရယူသည်။
SANOVO TECHNOLOGY GROUP FORCE Technology မှ SonoSteam လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဝယ်ယူပြီး ရယူပါ။
ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ချိ: SANOVO ProductRecovery
ကြက်ဥ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံတိုင်းအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်မှာ ကုန်ကြမ်းထွက်ကုန်များမှ အထွက်နှုန်းမြင့်မားရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူ ပရောဂျက်များကို ရေးဆွဲသည့်အခါတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို မြှင့်တင်ရန် နည်းလမ်းအသစ်များကို အမြဲရှာဖွေနေပါသည်။ စီမံဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း အရည်ထုတ်ကုန်များ၏ 0.5% မှ 1.0% ဆုံးရှုံးသွားသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသိရှိခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဆုံးရှုံးမှုကို ကုန်ပစ္စည်းအဖြစ်သို့ တစ်ဖန်ပြောင်းလဲနိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်စေသည်။
16 သြဂုတ်လ 2018
ကြက်ဥပရိုဆက်ဆာအဖြစ် သင့်အတွက် လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကြက်ဥပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံနှင့် ဗဟုသုတအားလုံးကို လက်စွဲစာအုပ်တွင် စုစည်းထားပါသည်။ ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်တွင် ကြက်ဥကို ဖောက်ထွင်းခြင်း၊ ခွဲထုတ်ခြင်း၊ pasteurization၊ con...
ဒိန်းမတ် တော်ဝင် ဂျပန်သို့ အလည်အပတ် ခရီးစဉ်
အောက်တိုဘာလ 12 ရက်နေ့တွင် ဒိန်းမတ်အိမ်ရှေ့မင်းသား HRH သည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံး mayonnaise ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရေရှည်တန်ဖိုးရှိသော သုံးစွဲသူထံသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါသည်။ ခရီးစဉ်အတွင်း သူသည် ကြက်ဥဖောက်စက်အသစ်ကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
09 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2022
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြပွဲသည် ကြက်ဥနှင့် ကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင် အကြီးကျယ်ဆုံးပွဲဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သည့်နှစ်များကတည်းက ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ အာရုံစူးစိုက်မှုသည် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် နည်းပညာ၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း၏ အဓိကအချက်များထံမှ ဘယ်သောအခါမှ ရွေ့မသွားပါ။ ပြီးတော့ 2022 မှာတော့ အရင်နှစ်တွေနဲ့ မတူပါဘူး။
Broiler Decontamination အတွက် ရနိုင်သော သုတေသနစာတမ်းအသစ်
သုတေသနဆောင်းပါးအသစ်သည် SonoSteam နည်းပညာ၏ အလားအလာကို လျှော့ချပေးသည်။ Campylobacter လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်သတ်ထားသော အသားစားကြက်များ၏ အစားအစာဘေးကင်းရေးနှင့် အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း။
Kletec နှင့် မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်အဖွဲ့ SANOVO
SANOVO TECHNOLOGY GROUP ကြက်ဥစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် အလိုအလျောက် stacking နှင့် palletizing solutions များကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပေးသွင်းသူ Kletec BV တွင် မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ Kletec ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် မကြာသေးမီက သဘောတူညီခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏လုပ်ငန်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရန် Blockchain၊ AI နှင့် IoT တို့နှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း။
02 ဇူလိုင်လ 2021
Pro Vision AI - 2021 ခုနှစ်အတွင်း ရောင်းချရန် အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
အမြင်အာရုံကို သိရှိနိုင်သောအခါတွင် အနာဂတ်သည် ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် 2021 ခုနှစ်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏အတန်းသူအားလုံးရှိ ကြက်ဥအကာများအတွက် အဖြူနှင့်အညိုအတွက် Pro Vision AI ဖြင့် crack detection ကို မိတ်ဆက်ပေးရန် မျှော်လင့်နေပါသည်။ ထို့အပြင်၊ မကြာမီတွင်၊ ကြက်ဥ grader တစ်ခုတွင် လိုအပ်သော အခြားသော ထောက်လှမ်းမှုများအတွက် တူညီသောနည်းပညာကို မိတ်ဆက်ပြီးနောက် မကြာမီတွင် ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။
RAME-HART သည် နှစ် 60 ပြည့်သွားပါပြီ။
11 ဇွန်လ 2021
RAME-HART ဟာ နှစ်ပေါင်း 60 ကျော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ ကာကွယ်ဆေးလုပ်ငန်းအတွက် စက်ပစ္စည်းကိရိယာများကို ဦးစားပေးရောင်းချသူ။
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - အသေးစားနှင့် အလတ်စား ကြက်ဥ ပရိုဆက်ဆာများအတွက် ထုတ်ကုန်အသစ်
29 ခုနှစ်ဧပြီလ 2021
ကြက်ဥအရည်အတွက် စျေးကွက်သည် အဆက်မပြတ် ပြောင်းလဲနေသည်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ပရိုဆက်ဆာကြီးတွေပါ။,aလှိုငျး အသစ်၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းes ရည်ရွယ်ချက် အားသာချက်များကို အသုံးချရန် စားသောက်ကုန်ကဏ္ဍသို့ ကြက်ဥအရည် ထုတ်လုပ်ရောင်းချရန် သူတို့ရဲ့ ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ.
အာရှဥဈေးကွက်- ကြက်ဥများကို အမြတ်အစွန်းရှိသော အကျိုးတူလုပ်ငန်းအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် တန်ဖိုးထပ်တိုးခြင်း။
23 မတ်လ 2021
Covid-19 အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဤနေရာတွင်တွေ့ကြုံခဲ့ရသည့်စိန်ခေါ်မှုအချိန်များတွင်အာရှရှိဒေသတွင်းကြက်ဥလုပ်ငန်းကိုထိခိုက်ခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီများအတွက်၎င်းတို့၏အစုရှယ်ယာများကိုကွဲပြားစေရန်ယခင်ကထက်ပိုမိုအရေးကြီးပါသည်။ ဤအင်တာဗျူးတွင်, Nourredine el Molaka, ၏အထွေထွေမန်နေဂျာ SANOVO အာရှနည်းပညာသည် ကြက်ဥထုတ်လုပ်သူများသည် ကြက်ဥများကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်ပုံကို ထိုးထွင်းသိမြင်စေပါသည်။
Ohmic အပူပေးနည်းပညာတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် အကြောင်းရင်း3ခု
ကြက်ဥအရည်ကို ကူးထည့်ခြင်း၏ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံသည် 2000 အစောပိုင်းကာလများသို့ ပြန်သွားပါသည်။ အစားအသောက် သုတေသနစင်တာများနှင့် တက္ကသိုလ်များနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသော ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းများကြားတွင် အစားအသောက်ကိုင်တွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာအမျိုးမျိုးကို အကဲဖြတ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါက ကြက်ဥအရည်ကို pasteurize လုပ်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲလား။
2021 ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်ခြင်း။
16 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2020
အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းစင်တာများ။ သင့်ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် စက်ရုပ်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုကို အလျှော့မပေးဘဲ ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ အမြင့်ဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခွင့်ပြုနိုင်သည့် ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု ရှိလျှင်ကော။
ကြက်ဥမှုန့် ပါဝင်ပစ္စည်းများ - ဘေးကင်းရေးနှင့် အရည်အသွေး အာမခံချက်၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အသိအမြင်
အစားအစာ ပြုပြင်ခြင်း သည် ထုတ်လုပ်မှု၊ လက်လီရောင်းချမှုမှသည် လက်လီရောင်းချမှုအထိ အစားအသောက်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ရှိ သက်ဆိုင်သူအားလုံးအတွက် ပိုမိုသိမ်မွေ့သော ဘာသာရပ်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းသည် အစားအသောက်ဘေးကင်းရေးကို ပို၍ပို၍အာရုံစိုက်ကြပြီး ထုတ်ကုန်တန်ဖိုးကွင်းဆက်မှတဆင့် မည်သို့စီးဆင်းသွားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ခြေရာခံပြီး အကဲဖြတ်ရန် စနစ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ကြသည်။
အမေရိကန်ကြက်ဥလုပ်ငန်းမှာ နံပါတ် ၁
10 စက်တင်ဘာလ 2020
At SANOVO ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်၏နေရာ၌ မိမိကိုယ်ကို ထားရှိကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ ဖြစ်နိုင်သမျှ အနည်းဆုံးလည်ပတ်မှုနှင့် ထိန်းသိမ်းနိုင်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော စနစ်များကို ဒီဇိုင်းဆွဲကာ အင်ဂျင်နီယာအဖြစ် အဆက်မပြတ်ကြိုးစားနေပါသည်။ အရည်အသွေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို မထိခိုက်စေဘဲ အလုပ်ချိန်နှင့် အထွက်နှုန်းကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် ဒီဇိုင်းရှုပ်ထွေးမှုကို တတ်နိုင်သမျှ အသုံးပြုရလွယ်ကူအောင် ထိန်းသိမ်းထားရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူများအတွက် တာဝန်ရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယူဆပါသည်။
Ovotrack နှင့် မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်
13 မေလ 2020
SANOVO TECHNOLOGY GROUP Ovotrack Holding BV တွင် ဗျူဟာမြောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုအတွက် Ovotrack ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် မကြာသေးမီက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး၊ ကြက်ဥခွဲခြင်းစင်တာများ၊ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံများနှင့် သားပေါက်မွေးစက်ရုံများအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ခြေရာခံနိုင်မှုနှင့် စာရင်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များအား ပံ့ပိုးပေးသူ Ovotrack Holding BV နှင့် သဘောတူညီခဲ့သည်။ Ovotrack သည် အမှီအခိုကင်းစွာ ဆက်လက်လည်ပတ်နေပြီး Job Beekhuis သည် Ovotrack BV နှင့် Hatchtrack BV နှစ်ခုလုံးအတွက် CEO အဖြစ် ဆက်လက်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
16 အောက်တိုဘာလ 2018
ပူသောမျက်နှာပြင်မှ လွှဲပို့သော အပူဖြင့် သမားရိုးကျ ပါစူရဆေးသည် အရသာ၊ အရသာ၊ အသွင်အပြင်နှင့် သဘာဝအတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိများကဲ့သို့ ဂုဏ်သတ္တိများစွာ ပျက်စီးသွားသောကြောင့် အစားအစာလုပ်ငန်းရှိ ထုတ်ကုန်အများအပြားကို ထိခိုက်စေပါသည်။
STAALKAT ဖြစ်လာသည်။ SANOVO
20 ဇွန်လ 2018
နှစ်ခြောက်ဆယ်ကျော် အရည်အသွေးမြင့်မားသော STAALKAT အမှတ်တံဆိပ်အမည်ကို အမှတ်တံဆိပ်အမည်ဖြင့် စျေးကွက်တွင် အစားထိုးမည်ဖြစ်သည်။ SANOVO.
သားဖောက်လုပ်ငန်းတွင် ဇီဝလုံခြုံရေးသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။
06 ဇွန်လ 2017
ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်မှတစ်ဆင့် မွေးမြူရေးခြံမှ သားပေါက်ဖောက်ခြင်းအထိ ကြက်ဥ ကိုင်တွယ်ခြင်းသည် သားဖောက်လုပ်ငန်းအတွက် အရေးကြီးဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဇီဝလုံခြုံရေး၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောကြက်ဥ ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် မှန်ကန်သောထုပ်ပိုးမှုတို့သည် သင်၏ဥပေါက်နိုင်မှု၊ ကြက်ကျန်းမာရေး၊ အသားစားကြက် သို့မဟုတ် အလွှာ၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့် သင့်လုပ်ငန်း၏ထိရောက်မှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - ဆန်းသစ်သော ကြက်ဥဖောက်ခြင်းနည်းပညာ
25 ဇန်နဝါရီလ 2022
ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်က ကမ္ဘာကြီးက ပြောင်းလဲနေတယ်။ တိုးပွားလာသော ကမ္ဘာ့လူဦးရေနှင့် ပရိုတင်းကဲ့သို့ အရင်းအမြစ်များ ရှားပါးလာခြင်းကြောင့် အစားအသောက် ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းကို ဥပမာအားဖြင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ လျှော့ချရေးနှင့် ကုန်ကြမ်းထွက်ကုန်များ အထွက်နှုန်း တိုးလာခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတ်လမ်းသည် ကြက်ဥတစ်လုံးကို ကြက် 20 ကောင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပုံအကြောင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကြက်ဥကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာပုံနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကို ကြက်ဥများကို အဖိုးတန်စီးပွားရေးအဖြစ်သို့ စဉ်ဆက်မပြတ်ကူညီနေပုံအကြောင်းဖြစ်သည်။ ငါတို့က အဖော်ပါ...
သက်သေခံချက်- Huevos Granjazul
15 စက်တင်ဘာလ 2021
Huevos Granjazul သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့သည်။ SANOVO Ardenta 300 ကြက်ဥ grader ထုတ်လုပ်မှုတွင် ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ကြီးထွားလာသော စျေးကွက်အတွင်း ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စေရန်။
အရည်အသွေးကို သက်သေပြနိုင်သည်- အသက် 26 နှစ်အရွယ် Grader တစ်ဦး
29 ဇွန်လ 2021
အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသူလေးတစ်ဦး၏ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအကြောင်း ဖတ်ပါ။သည်အရာ တစ်နေ့ကို ကြက်ဥ 180.000 ပြေးနေသေးတယ်။
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - စျေးကွက်အရွယ်အစားတိုင်းအတွက် ကြက်ဥအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း မိသားစုတစ်စု
ဥပဒေပြုအမတ်များနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက် အစားအစာဘေးကင်းရေး အာရုံစိုက်မှု မြင့်တက်လာခြင်းသည် ကြက်ဥလုပ်ငန်းများအပေါ် ဖိအားများ သက်ရောက်စေသည်။ ဤအပြောင်းအရွှေ့သည် ထုတ်လုပ်သူများအား ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဤစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် တွန်းအားပေးသည်။ SANOVO တနျးအတွက် 75 - 220 sကုန်တိုက်/အလတ်စား စွမ်းဆောင်ရည် မော်ဒယ်များကို အပြီးသတ်ရန် GraderPro ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးနှင့် လုပ်ငန်းအရွယ်အစားတိုင်းကို ကူညီပေးသည်။
SonoSteam နည်းပညာသည် အသားစားကြက်များတွင် ရောဂါပိုးများကို 98% အထိ လျှော့ချပေးသည်
09 ခုနှစ်ဧပြီလ 2021
SANOVO Biosecurity သည် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်သတ်ထားသော အသားစားကြက်သားပေါက်များအတွက် ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု တင်ဆက်သည်။ SonoSteam စနစ်သည် ထုပ်ပိုးခြင်းမပြုမီ လတ်ဆတ်သော သားပေါက်ကောင်များ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းသည့်အခါတွင် ဘက်တီးရီးယားများကို 98% အထိ လျှော့ချပေးပါသည်။
စက်ရုပ်အလိုအလျောက်စနစ်ဆိုင်ရာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု - Case Packer Pro
17 မတ်လ 2021
ကျွန်ုပ်တို့၏ အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကို တင်ဆက်ရခြင်းအတွက် ဂုဏ်ယူပါသည်။ Case Packer Proကမ္ဘာပေါ်တွင် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဆုံး အိတ်ဆောင်အိတ်။
နှင့် Case Packer Pro သင်သည် အမြဲပြောင်းလဲနေသော ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေပြီး မတူညီသော အထုပ်များနှင့် ထုပ်ပိုးမှုပုံစံများစွာကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။ ထူးခြားသောထုပ်ပိုးမှုခေါင်းသည် ၎င်းကို ဖြစ်နိုင်ချေရှိစေသည်။
04 ဇန်နဝါရီလ 2021
15 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2020
အဆိုပါ SANOVO Protein Footprint သည် အစားအစာ သို့မဟုတ် အစားအစာထုတ်ကုန်များအတွက် သင်၏အဆုံးဖောက်သည်နှင့် လျှောက်လွှာဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများကို သတ်မှတ်ရာတွင် ကူညီရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
စစ်မှန်သောခြေရာခံနိုင်မှုနှင့် ဒေတာသုံးစွဲနိုင်မှုနှင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်များ၏ အရေးပါမှု
ကြက်ဥထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် အစားအသောက် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဟူသော ဝေါဟာရကို မလိုက်နာဘဲ အစားအသောက် ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းကို ရွှေ့ရန် ခက်ခဲသည်။ ကြက်ဥကို ခြေရာခံနိုင်မှုသည် ဤအတွက် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် - အားလုံးသည် အာဟာရပြည့်ဝသော ကြက်ဥထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်ပြီး စားသုံးခြင်းကို ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။
Jiglabs နှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း သဘောတူညီချက်
16 ဇွန်လ 2020
SANOVO TECHNOLOGY GROUP အက်ကြောင်းထောက်လှမ်းမှုစနစ်များတွင် အနာဂတ်တွင် အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် ဉာဏ်ရည်တုကိုအသုံးပြု၍ optical-based computer vision system ကို ထပ်မံတီထွင်ရန်အတွက် JigLabs နှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း သီးသန့်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
ထုတ်ကုန်စတင်ခြင်း - ဗန်း stacker SX20
20 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2019
နှင့် SANOVO Traystacker SX20 သည် သင့်လယ်ယာထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းကို မြှင့်တင်နိုင်ပါသည်။
သံတမန်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဌာနချုပ်သို့ လာရောက်ကြသည်။
22 သြဂုတ်လ 2018
သံတမန် ၁၁ ဦးသည် အမှန်တကယ်တွင် “ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ၌ ပြုလုပ်သည်” ဟုခေါ်သော ပိုကြီးသောပွဲကြီး၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ မွေးရပ်နိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်သည့် သံတမန် ၈၀ ကိုလည်း ရေတွက်ထားသည်။ သံတမန်များသည် ဒိန်းမတ်ကုမ္ပဏီများ စျေးကွက်သစ်များဝင်ရောက်လာစေရန် ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရရှိရန် ဒိန်းမတ်နည်းပညာမြင့် ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများကို လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြသည်။
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - အကျိုးတူပူးပေါင်းပါ။
25 ဇန်နဝါရီလ 2018
လပေါင်းများစွာ တက်ကြွစွာ အဆက်အသွယ်လုပ်ပြီးနောက်၊ Giordano မိသားစုသည် ဒိန်းမတ်စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ထံမှ လက်ခံရရှိသည့် တောင်းဆိုချက်ကို လက်ခံခဲ့သည်။ SANOVO TECHNOLOGY GROUPGiordano Poultry Plast SpA ၏ မြို့တော်တွင် လူနည်းစု အစုရှယ်ယာဖြင့် ဝင်ရောက်ရန် ကြက်ဥနှင့် ဥထွက်ပစ္စည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော စက်မှုနည်းပညာကဏ္ဍတွင် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်၊
စက်ပစ္စည်းများကို တာရှည်ခံအောင် တည်ဆောက်ပါ။
24 ခုနှစ်ဧပြီလ 2017
ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်ပစ္စည်းများကို ခိုင်ခံ့သောဒီဇိုင်းနှင့် အရည်အသွေးမြင့်ဖြင့် တာရှည်ခံအောင် တည်ဆောက်ထားသည် - တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရုံပါပဲ။ SANOVO ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှ စက်ရုံမှ ထွက်ခွာပြီး ၄၈ နှစ်အကြာ ယနေ့ထိ လည်ပတ်နေဆဲဖြစ်သည့် ၁၉၆၉ ခုနှစ်မှ ကြက်ဥ ခွဲခြမ်းနှင့် ခွဲစက် ၄၀၀ ရှိသည်။